काठमाडौं । सुखी हुनु, खुसी हुनु र सन्तुष्ट हुनु सुन्दा उस्तै उस्तै लागे पनि यथार्थमा उस्तै रहेनछन् । परिभाषा मात्रै खोज्ने हो भने पनि विशाल ग्रन्थ बन्ने रहेछ । भौतिक सुखलाई खुसीसँग दाँजियो भने अपूरो हुने रहेछ । भौतिक चिन्तनले मानिसलाई कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । जब भौतिक सुखमा अध्यात्मिक चिन्तनलाई प्रवेश गराइन्छ, तव मात्रै मान्छे खुसी र सन्तुष्ट हुन पुग्दछ ।
खोजी सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । खोज्दै जाँदा कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए । न्यूटनले गुरुत्वाकर्षण पत्ता लगाए । डार्बिनले प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्त पत्ता लगाए । यी सबै नियम र सिद्धान्तको वैज्ञानिक परीक्षण भइसकेका छन् । तर, सुख र सन्तुष्टि तथा खुसीको भने त्यस्तो कुनै सिद्धान्त छैन, जसलाई निश्चित सूत्रमा बाँध्न सकियोस् ।
त्यसका लागि सन्तुष्टि चाहिन्छ । सन्तुष्टि अन्तस्करणमा लुकेको हुन्छ । समाजमा लुकेको हुन्छ । समाजको सेवाले मानिसलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ । यसका लागि अध्यात्मिक चिन्तन उत्तिकै चाहिन्छ ।
डाक्टर । विशिष्ट पढाइ अनि सम्मानित पेशा । तनहुँमा जन्मेर हुर्केका केशव पौडेललाई बच्चैदेखि यस्तै लाग्थ्यो । औषधि र उपचारमा उनको चाख थियो । व्यक्तिगत क्षमता र परिवारको साथ पनि पाए । त्यसैले त उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर पाए ।
एमबिबिएस पूरा गरे । रोजगारी नपाउने त कुरै भएन । अत्यन्त कुशल र समर्पित स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा पौडेलले आफूँलाई प्रमाणित गरिदिए । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा काम गर्दा उनलाई सन् २००३ मा दिइएको बेस्ट मेडिकल अफिसर अवार्ड नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।
उनको अध्ययनशील स्वभावलाई यो अवार्डले झनै बल पुर्यायो । चिकित्सा विज्ञानमा थप खोजी गर्ने हुटहुटी जाग्यो । त्यही हुटहुटीले उनलाई पुर्यायो सपनाको देश अमेरिका ।
विशेषज्ञताको खोजी गर्न अमेरिका पुगेका पौडेल ‘इन्टरनल मेडिसिन’का विशेषज्ञ डाक्टर बने । विशेषज्ञता हासिल गरेपछि पुनः नेपाल फर्किने योजनासहित अमेरिका पुगेका पौडेललाई अमेरिकी वातावरणले नेपाल फर्किन दिएन, उतै रोकिदियो । ‘एमडी पूरा गरेपछि फर्किने योजना थियो’ आफ्नो अमेरिका यात्रा र बसाइबारे उनले भने, ‘तर, खोइ किन हो, फर्किन सकिनँ।’
डा. पौडेललाई अमेरिकामा नै रोकिदिने कारण थियो, त्यहाँको भौतिक सुख । केही समय भौतिक सुखमा रमाए । सम्मानित पेशा थियो, आर्जन पनि राम्रै थियो, तर, उनको मन भने खुसी थिएन । उनलाई नेपालको माया बल्झिरह्यो । नेपालको न्यास्रो लागिरह्यो ।
नेपालमा रहँदा विभिन्न संघ संस्थामा रहेर काम गरेको उनको स्वभावले त्यहाँ पनि त्यस्तै खोजिरह्यो । राजनीतिक चेत थियो, लोकतान्त्रिक संस्कार थियो, सामाजिक भाव थियो, यिनै कुराले उनको मनलाई नेपालतर्फ डोर्याउँदै थियो । त्यही मनले उनलाई पुर्यायो सामाजिक अभियानमा ।
समाज एउटा नदेखिने धागोमा बाँधिएको हुन्छ । त्यो नदेखिने धागो भावना हो । भावनाको अर्को अर्थ अध्यात्म ।
नेपाल फर्किन्छु र केही गर्छु भन्ने थियो तर, यतै रोकिएँ, उनले भने, नेपाल र नेपालीसँग जोडिने प्रयास स्वरुप नेपाली समाजसँग सम्बन्धित संस्थामा सक्रियता बढाएँ ।
डा. पौडेलले सामाजिक संस्थामा सक्रियता मात्रै बढाएनन्, कतिपय संस्था त उनकै अग्रसरता र नेतृत्वमा स्थापित नै भए । कुनैमा पदाधिकारी रहे, कुनै संस्था स्थापना गर्ने अभियानको नेतृत्व लिए । राजनीतिक चेतबाट प्रशिक्षित पौडेलले अमेरिकामा नेपाली जनसम्पर्क समिति स्थापनाको नेतृत्व लिए । तर, पदाधिकारी रहेनन् । सल्लाहकारको भूमिकामा देखिए ।
समाजसेवामा होमिइसकेका पौडेलले दायरा र क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै लगे ।
प्रवासी नेपालीहरुको विश्व सञ्जाल गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) । संघमा उनको सक्रियता बढ्दै गयो । सन् २०१३ मा त उनलाई एनसीसी अमेरिकाको सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइयो । सल्लाहकारको भूमिकामा उनले आफ्नो सांगठनिक कौशल प्रदर्शन गरे ।
२०१५–२०१७–२०१९ मा लगातार दुई कार्यकाल एनसीसी अमेरिकाको नेतृत्व गरे । आफ्नै कार्यकालमा एनसीसी अमेरिकालाई संसारकै ठूलो एनसीसी बनाउन पौडेल सफल भए । पौडेलको सक्रियता, सांठनिक कौशल र सामाजिक भावकै कारण यो संभव भएको उनलाई चिन्नेहरु बताउँछन्।
मेहनत र अवसर पाए धन कमाउन गाह्रो हुँदैन । तर, मानिसहरुको मन जित्न भने त्यति सजिलो छैन। जागिर र व्यवसायमा जस्तो निश्चित समय दिएर मात्रै गरेको कामले मानिसहरुको मन जित्न सजिलो हुँदैन । यो तथ्यलाई राम्ररी बुझेका पौडेलले अमेरिकी नेपाली समाज र मातृभूमि नेपालमा सहयोगका लागि निरन्तर सक्रिय रहे।
२०१५ को विनाशकारी भूकम्पका बेला एनसीसी अमेरिकाको अध्यक्ष पौडेलले अमेरिका क्षेत्रबाट नेपालमा सहयोग ल्याउने अभियानको नेतृत्व मात्रै गरेनन्, अतिप्रभावित क्षेत्रमा आफैं खटिएर घाइतेको उपचार, पीडितलाई राहत तथा उद्दारमा सक्रिय रहे। नेपालमा बाढीपहिरो र आगलागीजस्ता दैवी विपत्ति आइपर्दा व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा सहयोग उपलव्ध गराउँदैै आएका पौडेलले हेल्प डेस्क नै स्थापना गरेर सहयोगी मनहरुलाई पनि जोड्ने प्रयास गरे ।
अमेरिकामा मात्रै संसारभर सामाजिक अभियन्ताको रुपमा परिचित पौडेलले यसबीचमा गरेका कामहरुको सूची लामो छ।
विदेशमा हुर्केको नयाँ पुस्तालाई नेपाली भाषा र संस्कृतिसँग जोड्न गैरआवासीय नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएका शहरहरूमा नेपाली भाषा कक्षा सञ्चालन र त्यसका लागि आवश्यक पाठ्यक्रमको विकास चानचुने कुरा थिएन । नेपालीपन र नेपाली मनबाट मात्रै यो संभव हुन्थ्यो, उनले प्रमाणित नै गरिदिए ।
डा. पौडेलकै कार्यकालमा विभिन्न अमेरिकी शहरहरूमा नेपाली भाषामा ड्राइभिङ लाइसेन्स परिक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । अमेरिकाका विभिन्न शहरहरूमा नेपाली भूगोलभित्रका नाम उल्लेख हुनेगरी गल्ली र सडकहरूको नामाकरण पनि गरियो । अमेरिकी सहरभित्र नेपाली नाममैै सडकको नामाकरण हुनु सबै नेपालीहरुका लागि गर्वको विषय हो ।
चिकित्सा यात्रामा एउटा स्थापित नाम हो, डा. केशव पौडेल । नेपालमा होस् वा अमेरिकामा उनी दक्ष चिकित्सकका रुपमा परिचित छन् । इन्टरनल मेडिसिनका विशेषज्ञ पौडेलले यसलाई प्रमाणित पनि गरिसकेका छन् । नेपालमै रहँदा उनले पाएको अवार्ड होस् वा अमेरिकी अस्पताल, विश्वविद्यालय र संस्थाहरुले उनलाई दिएको पुरस्कार र सम्मानले चरितार्थ गरिसकेको छ ।
अमेरिकामा लभलेस हेल्थ सिस्टम, न्यू मेक्सिकोको सिनियर मेडिकल डाइरेक्टरका हैसियतमा काम गर्दा पनि उनलाई दिइएको ‘हेल्थ केयर हिरो अवार्ड २०१७’ त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।
विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन, अस्पतालमा उपचार सेवा र आफैंले स्थापना गरेको अस्पतालको व्यवस्थापनबाट उनी कुशल व्यवस्थापकका रुपमा स्थापित भएका छन् ।
युनिभर्सिटी अफ टेनेसी, अमेरिकाबाट एमबीए गरेका पौडेल व्यवस्थापकीय कलामा पनि अब्बल सावित भएका छन् । जागिर गर्दा र आफैँले व्यवसाय सन्चालन गर्दाको फरक के रहेछ ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘जागिरमा समय सीमा हुँदो रहेछ, व्यवसायमा त्यस्तो कुनै सीमा नहुने रहेछ, सीमा नहुँदा चाहेको काम गर्न सजिलो हुने पाएँ।’
राजनीति समाज रुपान्तरणको मुख्य माध्यम हो । विद्यार्थी जीवनमा नै उनले यो सिकिसकेका थिए । तर, राजनीतिले मात्रै समाजलाई गति दिन सक्दैन । सामाजिक चेतना र जागरणको विकासका लागि छुट्टै अभियान पनि चलाउनुपर्छ । त्यो हो, सामाजिक अभियान ।
नेपाली समुदाय र समाजसँग सम्बन्धित संस्थाहरुमार्फत सामाजिक अभियान सन्चालन गर्नु राम्रो हुने उनको बुझाइ रह्यो । अमेरिकामा रहेका नेपाली समाजसँग सम्बन्धित दर्जनौं संस्थामार्फत उनले समाज रुपान्तरण र सेवाको काममा हात फैलाए ।
एनसीसी अमेरिकाको लगातार दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेका पौडेल कुशल संगठकका रुपमा परिचित छन् । स्पष्ट नीति र कार्ययोजनासहित सामाजिक अभियानमा सक्रिय हुने र आफ्नै नेतृत्वमा पूरा गर्ने उनको कार्यशैली छ ।
नीति बनाउने र आफ्नै नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्ने स्वभावका पौडेल यतिबेला गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(आइसीसी)को महासचिव बन्ने तयारीमा छन् ।
यही अक्टोबरको तेश्रो साता हुने आइसिसीको निर्वाचनमा उनले महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । अध्यक्षमा कुल आचार्यलाई समर्थन गरेका पौडेलले आचार्यको नेतृत्वमा स्पष्ट नीति र योजनासहित दुई वर्ष संस्थालाई गति दिने योजना बनाएका छन् ।
अमेरिकाको अध्यक्ष हुँदा अनलाइन मतदानको सुरुवात गरेका पौडेलले विश्वव्यापी रुपमा नै संस्थागत सुधारको योजना बनाएका छन् । संस्थागत सुधारसँगै गैरआवासीय नेपालीहरुबीचको एकता र उनीहरुले पाउने अधिकार व्यवहारमै स्थापित गर्ने पौडेलको योजना छ ।
नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता र सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, व्यवहारमा लागू भएको छैन । यो हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको मुद्दा हो, अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कुनै पनि पहल बाँकी राखिने छैन, उनी भन्छन् ।
गैरआवासीय नेपालीहरु नेपालको विकासको साझेदार बनिसकेका छन् । तर, लगानीको बाटो र सुरक्षाको प्रवन्ध भने अझै अनुकूल भइसकेको छैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेदेखि विदेशमा रहेको नेपाली ज्ञान, सीप र पूँजीलाई आकर्षित गर्न विशेष अभियाननै चलाउने उनको योजना रहेको छ। हामी नेतृत्वमा आयौं भने यसलाई व्यवहारमै रुपान्तरण गर्नेछौं, उनको प्रतिबद्धता छ ।
महासचिव पद संस्थाको सचिवालयको नेतृत्व पनि हो । सचिवालयले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन भने संस्थाकैै साखमा आँच आउँछ, जुन अहिले देखिएको छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्दै संसारभरका नेपालीहरुलाई जोड्ने अभियानमा सचिवालयलाई सफल बनाउने पौडेलको योजना रहेको छ ।
संस्थाको निर्णय प्रक्रिया र गतिविधि तथा व्यवहारमा पारदर्शिता अपनाउँदै संस्थालाई थप विश्वसनीय, भरपर्दो बनाउने प्राथमिकता पनि पौडेलले तय गरेका छन् । संस्थालाई जीवन्त राख्न सहभागिता र पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छ, उनको सूत्र छ ।
महासचिवका रुपमा संस्थालाई गति दिन सजिलो छैन । तर, अनुभव र योजना भएमा गाह्रो नहुने उनको विश्वास छ ।
लाखौं नेपाली विभिन्न कारणले विदेशमा छन् । कतिपय प्रवासी नेपालीहरु प्रत्यक्ष रुपमा यस अभियानमा जोडिएका छन् त कतिपय अप्रत्यक्ष रुपमा । अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका र कुनै पनि विधिबाट नजोडिएकाहरुलाई यो अभियानमा जोड्ने पौडेलको उद्देश्य छ ।
‘गैर आवासीय नेपाली संघ संस्था मात्रै होइन, अभियान पनि हो । यो अभियानमा सकेसम्म बढी प्रवासी नेपालीहरु जोडिनुपर्छ र जोड्नुपर्छ । अनि मात्र हाम्रो अभियान सफल हुने छ’ उनको भनाइ छ ।
संस्थामा सहभागी हुनु वा नेतृत्वमा पुग्नुमा सेवा भाव बाहेक अन्य कुनै स्वार्थ हुनुहुँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भयो भने संस्था संस्थाका रुपमा रहँदैन, कसैको निजी कम्पनीका रुपमा परिणत हुन्छ । सेवा भावलाई कुनै सीमाले बाँध्नु पनि हुँदैन । सीमा बिहीन समाज सेवा भावले मात्रै समाजलाई सही गति दिन सकिन्छ र संस्थाको साख वृद्धि हुन्छ ।
दक्ष चिकित्सक पौडेलले डेढ दशक लामो एनआरएन अभियानमा देखिएका कमजोरी र रोगहरुको पहिचान गरिसकेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ र जालझेलका घटनाले संस्थालाई रोगी बनाएको छ। सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण शिथिल बनेको संस्थालाई सांगठनिक र संस्थागत उपचार गरी सबल, सक्षम र साझा संस्था बनाउने उनको योजना रहेको छ ।